वुद्ध लामाको सन्नसनीपूर्ण भविष्यवाणी ! यस्तो भने ज्योतीषले (भिडियोसहित) – Complete Nepali News Portal
वुद्ध लामाको सन्नसनीपूर्ण भविष्यवाणी ! यस्तो भने ज्योतीषले (भिडियोसहित)
पोखरा । यतिबेला पहिलो नेपाल आइडल वुद्ध लामाको चर्चाले गगन चुमेको छ । पोखरामा बिगत ३० वर्ष देखि ज्योतिष शास्त्रमा अध्ययन गरीरहेका डाक्टल बलराम उपाध्याका अनुसार फेरी वुद्ध लामाको बारेमा भविष्यवाणी गरेका छन । एक अनलाइनसंगको कुराकानीमा उनले यस्तो रहस्य खोलेका हुन । सर्वाधिक पुरस्कार राशिको फ्रेन्चाईज शो नेपाल आईडल को उपाधी पोखरा का बुद्ध लामाले हात पारेका छन् । कतारको एम्पिथिएटर मा सम्पन्न फिनालेमा अन्य २ प्रतिस्पर्धी लाई दर्शक भोटले हराउदै लामाले उपाधी हात पारेका हुन् ।
जम्मा ९ करोड ३१ लाख ८३ हजार ३ सय ३५ भोट प्राप्त भएको थियो। जसमध्ये ४ करोड ४८ लाख ४५ हजार २ सय ६३ भोट प्राप्त गर्दै बुद्धले प्रतिष्ठाको पहिलो आवाज नेपाल आइडलको उपाधि जितेका हुन्। यो खबर उनको परिवार सम्म पुग्ने माध्यम बनेन अन्तता वुद्धले नै फोन गरे भन्ने यप भिडियोमा ।